မိုးမခရုပ်သံ | MoeMaKa Burmese News & Media
ကေဇွန်နွေး (Myanmar Now) ● အိမ်ပြန်ချင်သည့် ကချင်တိုင်းရင်းသားဒုက္ခသည်များ (ရုပ်သံ) (မိုးမခ) စက်တင်ဘာ ၁ဝ၊ ၂၀၁၈ (မိုးညှင်း၊ ကချင်ပြည်နယ်) — လူအများအပြား အိမ်ပြန်လိုပါက အခက်အခဲမရှိ အိမ်ပြန်နိုင်ကြ၏။...
၀ င်းမ င်းေ ထွး● အ ခ မဲ့ (No Charge) (မိုးမခ) မေ ၈၊ ၂၀၁၆...
လူငယ်တွေထိုးကြတဲ့ ထမနဲထိုးပြိုင်ပွဲ ရုပ်သံ မတ် ၆၊ ၂၀၁၄ ရန်ကုန်မြို့၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်က ရုံးခြံဝင်းမှာ မြန်မာပြည်က ထင်ရှားတဲ့ တီဗီထုတ်လွှင့်တဲ့ ကုမ္မဏီတခုဖြစ်တဲ့ ‘5 Network’ အဖွဲ့သားများရဲ့ ထမနဲထိုးပွဲ ထိုးနေကြပုံကို ရုပ်သံအဖြစ်...
ဘုရားသုံးဆူကျောင်းတိုက်က ထမနဲထိုးပွဲရုပ်သံမှတ်တမ်း မိုးမခရုပ်သံ၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၉၊ ၂၀၁၄ ရန်ကုန်မြို့ကမာရွတ်မြို့နယ်မှာတည်ရှိတဲ့ ဘုရားသုံးဆူကျောင်းတိုက်မှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ ထမနဲထိုးပွဲ – ထမနဲထိုးကြပုံအဆင့်ဆင့် ရုပ်သံမှတ်တမ်းကို မိုးမခပရိသတ်များအတွက် ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်။ No tags for this...
(မြို့မငြိမ်း အသက် ၁၀၅ နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ်) မိုးမခ ဇန္နဝါရီ ၂၅၊ ၂၀၁၄ မြို့မငြိမ်း (၁၉၀၉-၁၉၅၅) ဓာတ်ပုံမျှဝေသူ – Myanmar Classical @ မြန်မာသံလေးတွေ နားထောင်ကြမယ်...
ဂျူး (အသံထွက် ဝတ္ထု) မိုးမခ (ပြန်လည်ဆန်းသစ်ခြင်း) ဇန္နဝါရီ ၂၃၊ ၂၀၁၄ စာရေးဆရာမ ဂျူး (ခေါ်) ဒေါက်တာ တင်တင်ဝင်း (၁၉၅၈-) “… ကျွန်မ အကြောင်းကို သူတပါးအား...
မြင်းမိုရ်ထက်မြင့်သောနေရာ (ဇော်မျိုးထွဋ် (မဇ္စ္ဈိမလှိုင်း) အမှတ်တရ ဂုဏ်ပြု) ငြိမ်းချမ်းအေး ။ မိုးမခ။ ဇန္နဝါရီ ၁၃၊ ၂၀၁၄ ဇော်မျိုးထွဋ် (မဇ္စ္ဈိမလှိုင်း) (၁၉၆၀-၂၀၁၄)။ ဓာတ်ပုံ မျှဝေသူ – မဇ္စ္ဈိမလှိုင်း /...
ရိုးရာ ရှမ်းဟင်းထုပ်လုပ်နည်း – မိသားစုဗီဒီယို
ရိုးရာ ရှမ်းဟင်းထုပ်လုပ်နည်း – မိသားစုဗီဒီယို မိုးမခရုပ်သံ၊ ဇန်န၀ါရီ ၁၀၊ ၂၀၁၄ No tags for this post. Related posts No related posts.
ကနေဒါ – ဗန်ကူးဗားမှ မြန်မာမိသားစုတို့ ရဲ့ (၁၇)ကြိမ်မြောက် နှစ်ကူးအတာသင်္ကြန် ကျော်ဟုန်း ။ ဧပြီ ၂၃ ၊ ၂၀၁၃ ကနေဒါနိုင်ငံ ဗန်ကူးဗား ဘီစီမှာ အခြေချနေထိုင်နေကြတဲ့ မြန်မာမိသားစုများက...
suu-tokyoဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ တိုကျိုတက္ကသိုလ်တွင် ပြောကြားသော မိန့်ခွန်း ရုပ်သံ